“Haqa qabna; qabsoo keenya…uummata keenya defend godhuun mirga keenya.” J Goollicha Dheengee, Ajajaa WBO Zoonii Kibbaa « QEERROO
February 23, 2019 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Egaa haa ta’uutii; tokkoffaa waraanni bilisummaa Oromoo abdii gaachana uummata Oromootii. Kaninni qabsaa’aa tureef bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa uummata Oromoo mikaneessuudhaafi kan qabsoo godhaa turee. Egaa kana keessatti rakkoo waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Xoophiyaa jidduu akka laayyootti kan ilaalamu miti.
Gama keenyaan yoo laallu rakkoon kunii rakkoo jaarraa tokkoof walakkaa turee. Rakkoo guddaa kana akka rakkoo gandaatti gadi buusanii akka rakkoo Oromoo fo Oromoo gidduuttii akkasuma akka rakkoo hoggana ABO fi OPDO gidduutti gadi xiqqeessanii ilaaluuudhaan value qabu argatuu dhorkuudhaan araaruma sadarkaa gandaa tokkotti gadxiqqeessanii ilaaluun hinmalle. WBO’n galuu qaba jedhanii dunkaana dhaabuun maaliif baanee maal argannee gallaa? Wanti kaleessa manaa baaneef maltu nuu guutame? Akka uummata Oromootti maaltu argame? Maaltu guutame? Kanaafii; araarri gaarii ta’ee tokkoffaa mootummaan walii galtee kaleessa Eertiraatti waliigalame wanti hojiitti hiikame hin jiru, tokkolleen waan hiikka argate, hinqabu. Fkn: koree araaraa sanaaf waraqaa fuula lama qabu kan qabxii 10 qabu itti barreessinee turre; akka Zoonii Kibbaatti. Mootummaan kuni araara fakkeessaa gamtokkoon araara jedhaa, gamkaaniin ammoo wanti araara fakkaatu mul’achuutti hinjiru. Tooftaa siyyaasaaf tapha siyyaasaa mootummaan nurrat taphataa jira.
Jaal Goollicha: Guyyaa koree Teknikaa dhufe abbootii gadaa waliin jedhan sanaa waraanni mootummaa magaalaa Yaaballoo dacha meeqaan dhuunfate koree kana waliin dhufee. Haala akkasii keessatti akkamitti wal haasa’u wal haadsa’uumoo wal loluutti deemnaa? Humna hidhate waliin dhufanii eenyu dhaqee wal haasa’a? warra mootummaan marfamee jiruun, warra humna addaatiin marfamee jiruun akkamitti wal haasa’u? dhugaan jirummoo wanta kale manaa baaneef dhiisiitii; wanti mootummaaf ABO’n Asmaraatti wal haasa’aniyyuu qabsoo karaa nagaa gochuuf kan ABO’n finfinnee galeef wanti hiika argate hinjiru jechuudha.
Mootummaan illee waan walii galle, waan addaa walii mallatteessine hinqabnu jechaa jira. Miidiyaatti bahee, facebook tti bahee jechaa jira. Kanaafii gam keenyaan nagaa Gamkeenyaan nagaa nii jaallanna, nagaa yoo jaallannummoo araarichi ka nagaa ta’uu qaba. Nutii bardheeraaf waldhuksaa turre, bar dheeraadhaaf wal waraanaa turre qaamni bardheeraaf wal lolaa ture walitti dhufuufii qabxiileen tokko tokko kan amantaa ijaaran jiraachuu qabu. Nuuf mootummaa gidduu amantaan jiraa? Wanta kaleessaarraa maaltu geddarame? Nuuf mootummaa gidduutti nagaa buusuuf mallattoo maaltu mul’ate? Kanaafii nuti waraanni bilisummaa Oromoo ka jechaa jirru haalduree lafkeeyaanne sun nuuf haa guutumu. Utuu ajjeefamaa jirruu, utuu lolamaa jirruuutuu humni diinaa bakka kallee hingahin gahee nurratti jigee qubsiifamaa jiruu, maqaa araaraa dahoo godhachuun lafa kaleessa hingahin gahaa jiruu araarri akkanatti hinta’u.
Araarri kabaj qabu, araarri value qabu, sadarkaa kamittuu amansiisaa ta’e ka waraana bilisummaa Oromoo hinbabsine, kan mootummaa hinbaabsine, kanneen walab ta’an, kanneen dantaa fi bu’aa adda addaa mootummaarraa hinqabneen warren akkanaa araar kanaaf gaari ka jedhu qabxii adda addaa ibsineetiin jirra. Qaamotni ammo araar kanaaf deeman hedduun isaanii; isaanumaaf adda bilisummaa gidduutti araarri bu’uu qabudha. Warren kaleessa miidiyaa of harkaa qabaniin, qabsoo bilisummaa Oromoo xinneessuu, quucarsuu, hir’isuu, xiqqeessuu fi injifannoo cululuqaa addaa addaa qabsaa’ota bilisummaa Oromoon dhawata dhawataan argaman haaluudhaan injifannoo qabsoo bilisummaa Oromoon mirkanaawaa jiru divert godhanii iddoo biraatti jallisuun ka dhuunfaa godhatanii butatuuf fedhii addaa addaa qabaniin warra fedhii siyyaasa mataa ofii qaban kanneen activist jechuudhaan of waamanii kanneen ABO balleessuurratti hojjetaa turan har’ammoo jaarsa araaraa yogguu jedhan nuun akkamitti nutti dhagaa’ama?
Uummata keenya maaltu itti dhagaa’amaa? Kana qofaa miti; warren kaleessa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diiguudhaan yakkoota addaa addaa raawwatan, WBO miidhaa turan, qabsoo miidhaa turan kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo duuba deebisaa turan, har’ammoo mootummaan Xoophiyaa badhaasa kenneefii itti gaafatama nageenya Oromiyaa fi kanneen kana fakkaataan muuduudhaan; shira itti yaadee mootummaan kun araarri kun akka galma hingeenye kan godhe gamtokkoon araara ha jedhu malee waan mootummaan kun gochaa jiru kan araara kana itti fufsiisu miti.
Jaal Goollicha: Jaal kiyya mootummaan kun mootummuma uummatni keenya beeku mootummuma nuti beeknu; mootummaan kun mootumma umuriisaa guutuu kijibee jiraatu, fiilmii sobaa fiilmii dharaa, miidhakfatee namoota mandar keessaa Qawwee dulloomaa caccabaa moortarii, qawwee samana Hayila Sillaaseefaa walitti funaanee namootuma dadhabduu mandar keessaa walitti qabatee namootni hanganaa waamicha abbootii gadaa awwaate jedhee ittiin wacabaraa jira. Fiilmiin kun hundee hinqabu; namoota isaan agarsiisanillee namoota umuriidhaan baay’ee guddatanidha. Yookiin namoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessa dur turan malee; namoota dhadhabduu hanqina siyyaasaa qaban yoo ta’e malee waraanni bilisummaa Oromoo wanti galchu hinjiru, waanarganne hinqabnu. Kun ammo danqaa kan ta’e mootummaa Xoophiyaati.
Dhugaa dubbachuudhaaf adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa akkasuma Oromoo fi mootummaa gidduu rakkoo bardheer ture. Addi bilisummaa Oromoo kallacha ta’ee qabsoo uummata Oromoo gaggeessee diddaa finiinse kanaafii waldiddaa fi waldhabbii keenya waldhabbii akk laayyootti ilaalamu, labbi labbiin ilaalanii akka fedhanitti godhan utuu hintaane waan yeroon kennameefii, hayyootni adda addaa irratti hirmaatanii uummatni namootni bebbeekamoon garagaraa irratti hirmaatanii ballinaan rakkoon kun gadifaginaan rakkoo furan waan ta’eef ulfinni kennameefi yeroon fudhatamee maaltu ta’uu qaba jedhanii xiinxalanii gadi qabanii ol qabanii ilaalanii malee waan bultii 20 bultii 30 keessatti ta’u maal hanga kana gabaa dhaqnee Boqqolloo bitachuu moo gurgurachuu dhaqne.
Maal jennee galla? Maal arganne? Kaleessa maal jenne? Har’a maaltu mul’ate? Qaallittii galuuf gallaa? Makaalaawwii galuuf gallaa? Nutu araara jedhe malee mootummaan araara kana hinfudhanne? Yoo mootummaan araara hundee qabu nii fudhata ta’e araara nii barbaanna. Malee akka ammaa kanaan kan boojuu qabbanaawaa booji’amnu miti.
Jaal Goollicha Dhengee: Addi bilisummaa Oromoo ammayyuu wantanni dubbachuutti jiru sirriidha. Akka ABO fi mootummaan walii galuun qabsoo karaa nagaa gochuutti jiru karaa addaa addaa dhagaa’aa jirra, haa ta’uutii mootummaan waan kaleessa adda bilisummaa Oromoo waliin irratti walii galan guutee argamaa hinjiru. Maaliifii? Nuti bakgaaffiin uummaa keenyaa deebii argataa hinjirre, bak sirni kun gaaffii deebisaa hinjirretti haqa qabna qabsoo keenya defend godhuun mirga keenya, uummata keenya defend godhuun mirga keenya. Kanaafi dubbichi dubbii akkasumatti hogganni akkas jedhe, akkas jedhee odoo hintaanee bu’uuraa ka gaafattu jira: akkamitti, eessatti, eenyutti?
Gaaffilee kun sadarkaa hoggana kanaan wal gaafannee wal mari’annee, irratti wal mari’annu ture, mootummaan kun hogganaa fi qabsoo hidhannoo addaan muree jira. Qabsoo hidhannoo fi hogganni jiru wal dubbachuu hindandeenye, walitti dhufuu hindandeenye. Wal mari’achuu hindandeenye, wal gorfachuu hindandeenye kanaaf nuti akkanumaan lafaa kaanee galuu hindandeenyu. Hololatu jira, mooraa qabsoo hidhannoo irratti mootummaa hololaa jira. Quunnmtii keenyallee kutee jira. Wanti akkasii lafa hinaanjofnetti galli hinjiru.
Barruutti kan jijjiiree Qalbeessaa Dhangi’aati.
« SBO GURRAANDHALA 22,2019. Oduu, Miidhaa waraanni mootummaa EPRDF Gujii Bahaa keessatti geggeessaa jiru irratti gaaffii fi deebii ummata naannoo waliin taasisamee fi marii Obbo Lubee Birruu waliin taasisame
SBO GURRAANDHALA 24,2019. Oduu fi Gaaffii fi deebii Obbo Lubee Birruu waliin godhame kutaa lammataa »
SBO Bitootessa 15,2019. Oduu fi Deebi'ee banamuuf hayyama argachuu Waldaa Maccaa-Tuulamaa ilaalchisee gaaffii fi deebii Obbo Dirribii Damisee piresidaantii waldichaa duranii fi Obbo Waleensuu Reebuu waliin taasisame